Artillery Shelling Kills 1, Injured2in Rathedaung
September 18, 2020 AASYC 0
1 killed and2injured inaseries of artillery shelling by the Rathedaung based Burma Army’s battalion no. (538) into the Shwe Long Tin village under Rathedaung township on 17 September 2020 in the morning at around 9:30 am.
မြေပုံမြို့နယ်၊ ညောင်ကန်ကျေးရွာမှ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်သဖြင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူများ
September 9, 2020 AASYC 0
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ (၈) ရက်၊ (၀၈.၀၉.၂၀) ရက်နေ့၊ (၀၉း၃၀) နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်၊ မြေပုံမြို့နယ်ရှိ ညောင်ကန်ကျေးရွာထဲသို့ အမ်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်တောင်၌ တပ်စွဲထားသည့် အစိုးရတပ်မတော်မှ လက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင့် သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများစာရင်းဖြစ်ပါသည်။ သေဆုံးသူအမည်စာရင်း ၁။ ဒေါ်မိုးသဇင်၊ အသက် (၂၉) နှစ်(ဘ) ဦးချမ်း၊ Read More
ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာနှစ်ရွာမီးရှို့ခံရကာ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ရွာသားအချို့ သေဆုံး
September 4, 2020 AASYC 0
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၄ ရက် ရခိုင်ပြည်၊ ကျာက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာများအား (၀၃.၀၉.၂၀) ရက်နေ့ (၂၁:၀၀) နာရီခန့်တွင် မြန့်မာ့တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတခုမှ ဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့သောကြောင့် မူလအိမ်ခြေ (၂၄၀) ကျော်ရှိသည့် ဘုရားပေါင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀) ကျော်ခန့် မီးလောင်ပျက်စီးကာ မွှေနှောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် အိမ်ခြေ Read More
ရသေ့တောင်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီးများ လူနေအိမ်သို့ကျ၍ အရပ်သား (၅) ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
August 24, 2020 AASYC 0
၂၀၂၀၊ သြဂတ်(စ်) ၂၄ ရက် ရခိုင်ပြည်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ရံသာစည်ကျေးရွာရှိ ဦးကျော်အေး၏ နေအိပ်သို့ (၂၂.၀၈.၂၀) ရက်နေ့ (၂၀:၀၀) နာရီ ခန့်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီးကျည် (၂) လုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သောကြောင့် အသက် (၂) နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် (၁) ဦးအပါအဝင် Read More
ရမ်းဗြဲတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးသွားသော လူငယ် (၁) ဦးအား မိသားစုမှ အဆက်သွယ်မရ
July 4, 2020 AASYC 0
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် (၀၄) ရက်။ ရခိုင်ပြည်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်ဆောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ဆောက်ကျေးရွာနေ ကိုဇော်မင်းထွန်း အသက် (၃၁) နှစ် (ဘ) ဦးမောင်စံသိန်း၏ သားဖြစ်သူအား (၂၆.၀၆.၂၀) ရက်နေ့ (၁၇း၀၀) နာရီခန့်တွင် ၎င်းအလုပ်လုပ်နေသည့် စနဲမြို့မှ နေအိမ်သို့အပြန်တွင် ဆိတ်ဖူးတောင်၌ ယာယီ စခန်းချနေထိုင်သည့် Read More
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ရခိုင်ပြည်၌ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စုစုပေါင်း (၆၀)မှုနှင့် အရပ်သားပြည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု စာရင်းပြဇယား
June 15, 2020 AASYC 0
Table chart shows the overview of the (60) Human Rights Violations cases & impacts of the civilians during the armed conflicts in May2020, in Arakan. Read More